तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि पाँच जिल्ला सिफारिस « News24 : Premium News Channel
तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि पाँच जिल्ला सिफारिस
मकवनपूर, २२ असोज । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीका लागि पाँच जिल्ला सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशसभाले गठन गरेको स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले पाँच जिल्लाको नामसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
आज प्रदेशसभामा पेश भएको प्रतिवेदनमा काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरको नाम उल्लेख छ । गत असार २६ गते विशेष समितिले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन आजको बैठकमा मात्र पेश गरिएको हो । दशैं पछि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकले प्रतिवेदनमा छलफल गर्नेछ ।
संविधानमा दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यले स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । तीन नम्बर प्रदेशसभामा एकसय नौ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु नै राजधानीबारे एकमत देखिएका छैनन् ।
विश्‍व बैंक र आईएमएफकाे संसदीय नेटवर्कको बोर्ड सदस्यमा गगन थापा निवार्चित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापा विश्‍व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष
म त फेरि केपी ओलीको पुनरावृत्ति हुने देख्छु : डा. केसी
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले सत्ता गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीको